Umbala weMilo owenza i-Mars Red
I-Chemistry yoMbala Obomvu weMartian
Xa ukhangela phezulu esibhakabhakeni, unokukwazi ukubona iMarto ngombala obomvu. Nangona kunjalo, xa ubona iifoto zikaMars ezithathwe kwi-Mars, kukho imibala emininzi. Yintoni eyenza iMartile iPlanethi eliBomvu kwaye kutheni ihlale ibukeka ibomvu ngokukhawuleza?
Impendulo emfutshane yeso sizathu sokuba iMars ibonakale ibomvu, okanye ubuncinane obomvu-oluhlaza, kuba umbane waseMarti uqukethe inani elikhulu lokugquma okanye i-iron oxide . I-oxide yensimbi yenza uthuli olugqithisayo olujikelezayo emoyeni kwaye luhlala njengengubo enothuliweyo kwiindawo ezininzi.
Kutheni iMars ikhona enye imibala eVala
Uthuli emoyeni lubangela ukuba iMaric ibonakale ishushu kakhulu kwindawo. Xa kubonwa ngaphantsi, ezinye iimbala zibonakala, ngenxa yokuba abahlali bomhlaba kunye nezinye izixhobo azidingeki ukuba bajonge kwi-atmospheric yonke ukuba bababone, kwaye nxalenye kuba i-rust ikhona ngemibala engekho ebomvu, kunye nezinye iiminerali iplanethi. Nangona obomvu ngumbala oqhelekileyo wokugquma, ezinye i-oxides zensimbi zibomvu, zimnyama, ziphuzi kwaye ziluhlaza! Ngoko, ukuba ubona oluhlaza kwi-Mars, akuthethi kukho izityalo ezikhulayo emhlabeni. Kunoko, amanye amadwala aseMartian ahlaza, njengamanye amatye ayingqumbo eMhlabeni.
Ngoko, unokuthi uzibuze apho yonke le ngumbane ivela khona ukususela ekubeni iMarine ine-iron oxide eninzi emoyeni wayo kunanoma yiphina iplanethi. Iingcali zenzululwazi aziqinisekanga ngokupheleleyo, kodwa abaninzi bakholelwa ukuba insimbi yanyuka kwiintaba-mlilo ezazisetyenziswa.
Iimitha zelanga zenza umphunga wamanzi womoya uphendule ngesinyithi ukwenza i-oxides ene-iron okanye i-rust. I-oxides i-Iron ingaba nayo evela kwi-meteorites ene-iron-based, engasabela ngayo i-oksijini phantsi kwefuthe lemisebe ye-ultraviolet yelanga ukuze ibe ne-oxydes yensimbi.
Ngakumbi malunga ne Mars
I-Chemistry kwi-Mars Curiosity Rover
Isiqalo sokuqala soMfanekiso kusuka eMars
Kutheni i-Matriarity Mission Facts Matters
Isibonelo seGesi esibalulekileyo Ingxaki: Uxinzelelo oluthile
Iifomula zeCommic acid and Bases
Imibuzo yoLuntu lweMvavanyo yeMasa
Ukuphulukiswa koMoya woMoya Isibonelo
Isalathisi seNgxelo yeLebhu yeSayensi - Gcwalisa amaBlank
Indlela yokufunda iKhemistry ngokukhawuleza
Eyona Yona Yimimandla Yomdla kwiLebistry Lab
I-Carbon 14 Ukudibana kwezinto eziphilayo
Ibha ukuya kwi-atm - Ukuguqula iBhara ukuya kwi-Atmospheres Pressure
I-Bond Dissociation Energy Inkcazo
Iintlobo zeeComical Compounds
Indlela Yokuxelela Ukuba Unobulungisa Ubungqina Bobuninzi
Ngaba iTurkey yiNtando yeninzi?
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Helfen" (ukuNceda)
Fumana i-Scarab beetles kunye ne-Family Scarabaeidae
Iingoma ezi-1 eziPhambili zoLuntu
I-Hydrogen Electrode Definition
Iikholeji zeNtombi eziphezulu kwi-US
I-Prehistoric Turtle Imifanekiso kunye neeprofayili
'Ukuba Unoyolo kwaye Uyazi' Iikhowudi